bread-isixhosa - Amandla.mobi
Makungenyuswa ixabiso lesonka.
1,500 signatures required
Ixabiso lesonka lizakunyuka. Oku kuzakubetha iimpokotho zabo bangathathi-ntweni ikakhulu. u-National Treasury makangenelele aqinisekise ukba ezinkampani zesonka azilonyusi noba kukanjani na ixabiso lesonka. Oku kukhombisa ukucingela abo baxhomekeke kurhulumente ngemali yesibonelelo.
Ukonyuswa kwexabiso lesonka kuzakubangela ukuba abo bazisokolelayo bangabi nanto yakutya kuba isonka yeyona nto ityiwayo.
 Bread price likely to rise 10% after hike in wheat import duty, Linda Ensor for Business Day. 11 April 2016.
Mphathiswa wezimali Mnumzana Gordhan kunye nowezorhwebo noshishino Mnumzana Davies
Simemelela kuni ukuba nehlise ngokukhawulezileyo, umrhumo kwingqolowa engena eMzantsi Afrika ngokwangoku ukuze sinqande ukonyuka kwexabiso lesonka kweli. Siphinda futhi sicela ukuba nihlale phantsi neCompetition Commission nibonisane ngendlela ekungenziwa ngayo ukwakhela umkhanyo, kujongisiswe kwaye lulawulwe indlela iinkampani ezenza ngayo imali. Isonka kukutya kuninzi lwabantu abahlelelekileyo. Sicela ukuba niqinisekise ukuba abanakuchaphazeleka xa kusonyuka ixabiso lesonka njengoko kulindelekile. Ixabiso lezinto zobisi (Dairy products) kunye nombona zibangele ukuba konyuke amasi, ubisi kunye nomgubo, izinto zokutya ezibalulekileyo kwikhaya. Amakhaya amaninzi awasakwazi ukuthenga konke okufunekayo ngenxa yokunyuka
u-National Treasury makangenelele aqinisekise ukuba iinkampani zezonka azilonyusi ixabiso lesonka ngokuthi alawule indlela ekubekwa ngayo ixabiso lesonka. Ebambisene no-Trade &Industry, mabajonge ukwehliswa komrhumo wengqolowa ethengwa ngaphandle kwelizwe. Oku konyuswa kwexabiso lesonka kwenzakalisa ngakumbi abo bangathathi-ntweni.